कैलाशको कुटी: रिक्सा र ठेला चालकसँग चौतारीमा बिसाउँदा
Posted by कैलाश at 1:24 PM
चौतारीको गफ्गाफ त राम्रै राख्नु भएछ, यस्को लागि धन्यवाद । तर कुरा के भने नि लेख राख्नु अघी एक्छोति पढ्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ? लेखम उल्लेख गरेको पत्र कमला महिला होइन र ? तेसो भए उन्को श्रीमतीसँग बेमेल कसरी भयो हौ ? एनिवे कीप इत अप ।
सबैको कथाव्यथा आ-आफ्नै छ । मजदुर को आँखा बाट हेर्दा मजदुर को समस्या ठूलो, साहूको आँखा बाट हेर्दा साहू कै समस्या ठूलो ।
विद्यार्थीको आँखाबाट हेर्दा विद्यार्थीको समस्या ठूलो अनि शिक्षकको आँखाबाट हेर्दा शिक्षकको समस्या ठूलो । यहाँ पेलिने पेलिइराखेको छ, मर्ने मरिराखेको छ अनि जोतिने जोतिइरहेको छ । यस्तै छ सारासंसार अनि त्यस्तै छ नेपाली समाज पनि ।
जेहोस् मार्टिन चौतारी को गफगाफ राख्नुभएको मा धन्यवाद । फरक केही लागेन, बरु मात्र लाग्यो एउटा अर्को व्यक्तिको कथाको सार्वजानिकिकरण भयो, अनि मैले अर्को एकजनाको कथा थाहा पाएँ । मात्र थाहा पाएँ उसको व्यथा । म गर्न केही सक्दिन, जस्तो उनीहरु त्यस्तै म, मात्र फरक होला त समस्या । उनीहरुको आफ्नै समस्या, अनि मेरो, तपाई, उसको, उनको अर्कै समस्या ।
समाजले केवल "जोताउने" कार्यमा मात्रै प्रयोग गरिएका वर्गको जिवनको यो पाटो पढदा रमाईलै लाग्यो ।
बाँकी आकार जीले भन्नु भएको जस्तै समस्या र बाध्यता सबैको हुन्छ। दृष्टीकोण फरक गरेर हेर्दा र बेला मौकाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल बन्दको बेलाको रिक्सा र ठेलागाढाको भाऊ को पनि प्रसंग उठन सक्छ। समष्टिमा सबै बर्ग र क्षेत्रमा सहि र गलत मानिस छन।
जे भएपनि श्रम गरेर खानेमा मेरो सहानुभूति भने सधै रहेको छ ।
चौतारीमा प्रत्यक्ष पलेँटी कसेर आम मान्छेहरूका यस्ता कथा सुन्न नपाएको धेरै भएथ्यो । खासमा, यति साधारण अनुहार पनि चौतारीका पाहुना हुन्छन् भन्ने नै थाहा थिएन । तपाईँको प्रयासले त्यो झल्को मेटिन पायो । ठेलागाडा, रिक्सा चालक तथा घरेलु कामदारका कुराकन्था उनीहरूकै बोलीमा आएको देख्दा गजब लाग्यो, मानौँ म चौतारीकै चकटीमा मग्न भइरहेछु ।
चौतारीले गराउने यस्तो फरक धारका पण्डितहरूको जमघटबाट टपक्क टिपेर कैलाशजीले तिनको जीवनको यथार्थ धरातल पस्किएर सर्सर्ति पुलको काम मात्र गर्नुभएन, तिनको दुःखको स्वानुभूतिमा पाठकलाई डुबाउनुभएको पाएँ । छुटकाराको नाममा दैनन्दिनी जाँतोमा पिसिँदै आएका कुमारी थापा, अर्जुन खत्री र बम बहादुर श्रेष्ठ जस्तालाई श्रमशील जीवनबाट झिकिदिनु त उनीहरूकै बिजोगको बाटो खोलिदिनु हो, बरु त्यो जीवनलाई सहजता प्रदान गर्न हामी सर्वसाधारणहरूले आफ्नो तवरबाट भूमिका खेल्न सक्छौँ ।
यस्तै गफगाफ चौतारीबाट सोझै ब्लगको जालोमा उनिएर माइकिङ भएको देख्‍न पाऊँ ।